सुनको मूल्यमा फेरि रेकर्ड ब्रेक, प्रतितोला रु. ७१ हजार पुग्यो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार एकैदिन फेरि १ हजार रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ तोलाको ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने तेजाबी सुन तोलाको ७० हजार ७०० रुपैयाँ पुगेको छ । गत शुक्रबारदेखि स्थिर रहँदै आएको सुनको भाउ मंगलबार एकैपटक १ हजार रुपैयाँ बढेको हो ।...
सुनको मूल्यमा फेरि रेकर्ड ब्रेक, एकै दिन प्रतितोला रु. १५०० सयले बढेर रु. ६९ हजार ५०० पुग्यो, यस्ता छन् भाउ बढ्नुको कारण
काठमाण्डौ । पछिल्ला केही दिनयता बहुमूल्य पहेँलो धातुका रुपमा रहेको सुनको मूल्य नेपाली बजारमा ऐतिहासिक विन्दुमा पुगेको छ । गत आइतबारयता छापावाला सुन प्रतितोला ३ हजार ७०० रुपैयाँले बढेको छ । सुनको मूल्य बुधबार फेरि एकैपटक प्रतितोला १५ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ६९ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको छ । यो नेपाली सुन बजारकै इतिहासमा सबैभन्दा...
सुन प्रतितोला तीन दिनमै रु. २२०० ले बढ्यो, अझै भाउ बढ्न सक्ने
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ दिनानुदिन बढ्दै नयाँ रेकर्ड कायम भइरहेको छ । छापावाला सुन प्रतितोला मंगलबार पनि रु. २०० बढेर ६८ हजारमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । यो नेपाली बजारकै इतिहासमा सुनको मूल्यमा यति उचाइमा पुगेको पहिलोपटक हो । नेपाली बजारमा गत आइतबारदेखि तीन दिनको अवधिमा २ हजार २०० रुपैयाँ प्रतितोला बढिरहेको छ । सुन चाँदी...
एकैदिन सुन प्रतितोला रु. १५ सयले बढ्यो, नयाँ कीर्तिमान कायम
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउले अहिलेसम्मकै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । छापावाला सुन प्रतितोला सोमबार एकैदिन १ हजार ५०० रुपैयाँले बढेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको हो । बजारमा सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला ६७ हजार ८०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य यो उचाइमा पुगेको ऐतिहासिक भएको नेपाल सुनचाँदी...
सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला रु. ६६ हजार ३०० पुग्यो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले आइतबार नयाँ रेडर्क चुमेको छ । नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार आइतबार सुनको भाउमा प्रतितोला रु ५०० बढेर रु. ६६ हजार ३०० पुगेपछि नेपाली बजारमा यो मूल्य अहिलेसम्म सबैभन्दा उचाइमा पुगेको हो । सुनको भाउ शुक्रबार प्रतितोला रु. ६५ हजार ८०० पुगेको थियो । नेपाली बजारमा आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला रु...
काठमाण्डौ । नेपालको सुन बजारको इतिहासमा हालसम्मकै उच्च मूल्य पुगेको सुनको भाउ बुधबार भने घटेको छ । बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । हिजो मंगलबार सुन प्रतितोला ६५ हजार ५०० रुपैयाँमा करोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेका कारण नेपाली...
सुनको मूल्य एकाएक बढ्यो, एकैदिन रु ६०० वृद्धि
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार प्रतितोला ५७ हजार ४०० मा कारोवार भइरहेको छापावाल सुन आज रु ६०० ले बढेर प्रतितोला रु ५८ हजार ३०० मा कारोवार भएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु कमजोर भएका कारणले आन्तरिक बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य बढेको महासङ्घले जनाएको छ । आइतबार...
सुनको भाउ एकाएक बढ्यो, वर्षकै महङ्गो !
काठमाण्डौ । पहेँलो धातु सुनको भाउ यो वर्षकै सर्वाधिक उचाईमा पुुगेको छ । यो दिन सुन प्रति तोला ५८ हजारको उचाईमा पुुगेको हो । फागुन महिनाको सुरुवातदेखि नै सुनको भाउ बढिरहेको थियो । फागुन १ गते सुन प्रतितोलाको ५७ हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । त्यसपछि निरन्तर बढिरहेको मूल्य शुक्रबार ५८ हजारको उचाईमा पुुगेको हो । फागुन २ गते सुन...
एकाएक ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, १७ महिनाकै उच्च
काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ १७ महिनाकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ तीनवर्षकै सस्तो भएपछि सुनको भाउमा उछाल आएको हो । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार सुनको भाउ सन् २०१६ अगस्टपछिकै उच्च कायम भएको हो । बिहीबार सुनको भाउ प्रति औंस १३६१.१० डलरको उचाईमा पुगेको छ । सन् २०१६ अगस्ट ५ मा सुनको भाउ प्रति औंस...
किन अचाक्ली बढ्दैछ सुनको भाउ ? एकसातामै १२०० रुपैयाँको बढोत्तरी
काठमाण्डौ । पहेँलो धातु सुनको भाउको उकालो यात्रा अझै रोकिएको छैन । पछिल्लो एकसाताको अवधिमा सुनको भाउ प्रति तोलामा १२०० रुपैयाँ बढिसकेको छ । पुस २६ गते सुनको भाउ प्रति तोला ५६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा मंगलबार ५७ हजार २ सय पुगिसकेको छ । माघ १ गते सुनको भाउ प्रतितोला ५७ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, पुस २७ गते ५६ हजार ४ सय र २८ गते ५६...
सुनको भाउ महिनाकै उच्च विन्दूमा, अमेरिका-चीनका कारण अझै बढ्नसक्ने
काठमाण्डौ । पहेँलो धातु सुनको मूल्यले पुस महिनाकै उच्च विन्दू चुमेको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ५६ हजार ६ सय कायम भएको हो । पुस ३ गते सुन प्रति तोला ५४ हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यसपछि बढेर पुस १९ गते ५६ हजार कायम भएको थियो । २० गते ५५ हजार ८ सयमा झरे पनि २१ गतेदेखि भने सुनको भाउ प्रतितोला ५६ हजार माथि नै कायम भइरहेको छ । पुस २६...
डलरको कमजोरी र क्रूड आयलको मजबुतीले सुनको भाउ आकाशियो, नेपाली बजारमा ६० हजार पुग्नसक्ने !
काठमाण्डौ । पहेँलो धातुु सुनको मूल्य पुस महिनाकै उच्च विन्दूमा पुगेको छ । डलर कमजोर हुँदै जाँदा तथा कच्चा तेलको मूल्यमा बढोत्तरी भइरहँदा नेपाल भित्रिने सुन महङ्गिन थालेको हो । अर्कोतर्फ उत्तरकोरिया र अमेरिकाबीचको बढ्दो तनावले समेत सुनको भाउ बढ्न थालेको जानकार बताउँछन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार पुस २० गते प्रति तोला ५५...
सुनको मूल्य महिनाकै उच्च विन्दूमा, ६० हजारसम्म पुग्नसक्ने !
काठमाण्डौ । पहेँलो धातुु सुनको मूल्य पुस महिनाकै सर्वाधिक उचाईमा पुुगेको छ । डलर कमजोर हुँदै जाँदा तथा कच्चा तेलको मूल्यमा बढोत्तरी भइरहँदा नेपाल भित्रिने सुन समेत महंगिन थालेको हो । अर्कोतर्फ उत्तरकोरिया र अमेरिकाबीचको बढ्दो तनावले समेत सुनको भाउ महंगिन थालेको जानकारहरु बताउँछन् । पुस महिनाको सुरुवातमा सुनको मूल्य प्रतितोला ५४...